स्याङ्जा-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम शाखाबाट वालिङ उद्योग वाणिज्य संघलाई अदुवा उत्पादनका लागि प्राप्त अनुदानमा अनियमितता भएको छ । कम्पनीमार्फत अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र त्यसको रेखदेख उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने गरी सम्झौता गरेर प्राप्त रकममा अनियमितता भएको हो ।
‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ अन्तर्गत स्याङ्जामा अनुदानबाट सञ्चालनमा आएको अदुवा प्रशोधन केन्द्र पछिल्लो समय अख्तियारको निगरानीमा परेको छ । जिल्लालाई अदुवा खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले दिएको अनुदान रकम हिनामिना गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ देखि ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सम्झौताअनुसार वालिङलाई अदुवाको कार्यक्रम परेको थियो । कम्पनी सञ्चालकहरूले अर्को सोही व्यहोराको कार्यक्रम गर्न सामथ्र्य नामक एक गैरसरकारी संस्थाबाट अदुवा उद्योगलाई अनुदान लिएपछि एउटै उद्योगमा दोहोरो लगानी गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था भएकाले अनियमितता बाहिर आएको हो । एउटै उद्योगमा दोहोरो लगानी भएको भेटेपछि कृषि उद्यम केन्द्रले छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयलाई छानबिन र अनुगमन गर्ने निर्देशन दिए अनुसार पोखरा अख्तियारले उद्योगको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा २८ सुचकांक पुरा भए-नभएको सोधपुछ गरेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत र कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहमति भएको थियो । सहमति अनुरूप सरकारीले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद सहित कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारमा रकम खर्च गरेको कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन खनालले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा ५२ लाख ४७ हजार ४ सय १५ रूपैयाँ र आ.ब. २०७२-०७३ मा ९३ लाख ५० गरी दुई किस्ता गरेर अदुवा प्रशोधन केन्द्रलाई १ करोड ४५ लाख ९७ हजार ४ सय १५ रूपैयाँ अनुदानको रकम प्राप्त भएको खनालको भनाई छ ।
सम्झौता अनुसार ५०-५० प्रतिशतले कुल रकम २ करोड ९१ लाख ९४ हजार ८ सय ३० रूपैयाँको कम्पनीको सेयर रकम हुनुपर्ने हो, तर दोहोरो अनुदान एउटै उद्योगमा माग गर्ने र अदुवा उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने अनुमान गरी कृषि उद्यम केन्द्रले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको बताईको छ ।
अख्तियार प्रदेश पोखराले गरेको अनुगमनमा हिसाबकिताब अपरादर्शी, उद्योग बन्द, उद्योगलाई तारको जाली बुन्ने केन्द्र बनाइएको, मेसिन चलाउन खोज्दा नचलेको लगायतका कमजोरी अवस्थामा उद्योग रहेको अख्तियारले जनाएको छ । एउटा टोलीले उद्योगको अनुगमन गरेको पोखराका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले बताए । “टोलीले सोधपुछ गरेका विषयमा कुनै विवरण दिन कम्पनी सञ्चालकले सकेनन्,” उनले भने, “उद्योगमा अनुदानको रकम परिचालनमा बदनियत देखिन्छ ।” अब के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा रिजालले भने, “प्रारम्भिक छानबिन सकिएको छ, उजुरी केन्द्रीय आयोगमा परेकोले बाँकी काम कारवाही केन्द्रले नै गर्नेछ ।”
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको निर्देशन र सहजीकरणमा सञ्चालन गर्ने गरी आएको अदुवा प्रशोधन केन्द्रको यस्तो प्रकरणमा संघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बताए । संघमै आवद्ध साथीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर पनि उद्योग सञ्चालनमा नआउदा संघ चिन्तित भएको पौडेलले बताए । “वालिङलाई औद्योगिकीकरण गर्ने संघको लक्ष्यअनुरूप अदुवा उद्योग ल्याएका थियौं,” उनले भने, “संघको गरीमामाथिनै आँच आउने काम कम्पनी सञ्चालकहरूले गरे ।” पछिल्लो समयमा अख्तियारको टोली आएर उद्योगको अनुगमन गरेको थाहा पाएर पनि सञ्चालकले संघलाई खबर नै नगरेकोमा पौडेलले गुनासो गरे ।